Qaar ka Mid Ah Ragga Soomaaliyeed Oo Gabdhihii Hinhiyaanka ahaa Intay Guursadeen Ka Baxsaday | Raadgoob
Qaar ka Mid Ah Ragga Soomaaliyeed Oo Gabdhihii Hinhiyaanka ahaa Intay Guursadeen Ka Baxsaday
Ragga Soomaaliyeed qaarkood oo guurka qarsoodiga iyo mid muddo kooban ah ku gala Hindiya ayaa ka kala yimaada Mareykanka, Yurub iyo wadammada Carabta. Guurka oo dhowr nooc ah ayaa ragga qaar waxaa uu u yahay dalxiis, kuwaasoo marka ay gabdhaha guursadaan muddo kooban la jooga, kadibna isaga dhuunta.
Raggan qaar ayaa sidoo kale gabdhaha ka doonta qoysaskooda, kuwaas oo marka ay muddo aan badnayn joogaan isaga dhuunta, taasi oo walaac ku keentay mustaqbalka gabdhaha.
xaafadda Old City oo ah xaafad ay deganyihiin Hindida Muslimiinta ee danyarta ah uu ku kubooqday gabar Hindi ah oo uu guursaday nin Soomaali ah, ka dibna isaga tegay laba bilood ka dib isgoon waxba u sheegin,, taas oo ka careesiisay qoyska gabadha.
”Haddii aad tihiin Soomaali waxaad tihiin dad aad u xun oo ku dheela gabdhaheena, ma dooneyno inaan kula hadalno” waxaa sidaasi qoyska gabadha la xumeeyay ay ku yiraahdeen Bashiir Caato.
Qoysaska gabdhahan oo ah kuwa danyar ayaa inta badan doorbida dhaqaalaha ay ka heleyaan ragga doonaya gabdhahooda, balse taasi waxaa ay msutaqbal la’aan u horseeday gabdho yaryar oo Hindi ah oo marka aad aragto aad da’dooda ku qiyaasayso 15-20 jir.
Weriyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato ayaa intii uu joogay magaalada Hyderabad waxaa uu sheegay inuu arkay gabar Hindi ah oo uu guursaday nin Soomaali ah, balse uu isaga dhaqaaqay laba bilood kadib, taas oo horseeday in qoyskeeda ay takooraan, maadaama qaarkood guurka noocaasi oo kale ah aysan waalidkood raali ka aheyn, balse ay iyagu doorbidaan.
Ragga guur doonka, noocii ay doonaanba ha ahaadaane, waxay inta aanay ka soo ambabixin dalalka ay ku nool yihiin la soo xiriiraan rag gacan ka siiya guurka ay doonayaan, kuwaas oo uu ka mid yahay Maxamed Ismaaciil.
Image captionMaxamed Ismaaciil wuxuu ragga Soomaalida ka cawiyaa helitaanka xaas Hindi ah
Maxamed wuxuu muddo labaatan sano ah ku noolaa Hindiya, waxaana uu BBC-da uga sheekeeyey qaabka uu u dhaco guurka qarsoodiga iyo doorka uu ku leeyahay.
”Inkastoo ay jiraan rag annaga noo yimaada, haddana intooda ragga gabdhaha ku dheela waxaa ay u tagaan niman Hindi ah” waxaa sidaasi BBC-da u sheegay Maxamed Ismaaciil.
Maxamed ayaa sidoo kale sheegay in ragga qaar marka ay u yimadaan ay iska dhigaan inay yihiin rag guur doon ah, balse marka ay gabdhaha guursadaan ay muddo gaaban ka dib isaga dhaqaaqaan. Arrintan ayaa waxaa kale oo uu sheegay inay saameyn ku yeelatay isaga, maadaama uu yahay qofka ragga qaar gabdhaha u raadiya.
Qaar ka mid ah dadyowga Hindida oo dhaqan ahaan aaminsan in haddii gabadha la furo aan mar dambe la gursan ayaa waxay mutsaqbal la’aan ku keentay gabadhaasi, halka qaarna ay guurka noocaasi ah ay ka dhaxlaan xanuun dhanka maskaxda ah iyo fuquuq ay kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin.
Image captionXaafadda Paramount waa halka ay Soomaalida ugu badan ka deggan yihiin Hyderabad
Inkastoo ragga qaar uu guurka gabdhaha Hindida Muslimiinta ee saboolka ah uu ka yahay dalxiis oo keliya, ayaa hadana dhanka kale waxaa jira rag Soomaali ah oo gursaday gabdho Hindi, kuwaasoo si wanaagsan u dhaqda.
Dadkaasi ayaa waxaa ka mid ah Maxamed Filibiin oo isagu qaba gabar Hindi ah, waxaana uu sheegay inuu ka mid yahay dadka ku najaxay guurka gabdhaha Hindida.
Wuxuu intaa ku daray in ragga Soomaalida ah ee ku dheela gabdhaha ay sumcad xumi ku tahay bulshada Soomaaliyeed eeku nool dalka Hindiya.
Nooma aysan suurtagelin inaan la xiriirno mas’uuliyiinta laamaha ammaanka ee Hyderabad, hase yeeshee waxaa jira dadaalo ay dowladda Hindiya waddo, kuwaasi oo looga hortagayo guurka muddada kooban iyo midka qarsoodiga oo haddii ay sii socdaan dhaawac weyn u geysan kara sumcadda iyo fikirka laga aaminsanyahay dadka Soomaalida ee dalka Hindiya u tago waxbarshada, ganacsiga , caafimaadka iyo dalxiiska.